ဘဘဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ဖြေမဆည်နိုင်အောင်ရင်ထဲမှာကြေကွဲရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ၀ါဝါ၀င်းရွှေ – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ ယနေ့အချိန်ထိတိုင် အရွယ်တင်နုပျိုပြီးလန်းဆန်းတက်ကြွနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေနိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ဝါဝါဝင်းရွှေက ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်များစွာကို သိမ်း ပိုက်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဝါဝါဝင်းရွှေက မြေးမလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်လက်တွဲခေါ်ယူပြီး သေချာသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါ တယ်။
ဝါဝါ‌ဝင်းရွှေက ချစ်သားသမီး၊မြေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဝါဝါဝင်းရွှေရဲ့သားတွေကလည်း မိခင်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပြီး အမြဲပျော်စရာတွေသာ ဖန်တီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဝါဝါဝင်းရွှေတို့မိသားစုလေးကစည်းစည်းလုံးလုံးရှိကြပြီး အပြန် အလှန် ဖေးမကူညီ ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ ဝါဝါဝင်းရွှေ ရဲ့သားငယ်လေး ဝါဇင်က မိသားစုနဲ့အတူ စင်ကာပူမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါ တယ်။
အကယ်ဒမီ ဝါဝါဝင်းရွှေက ဆရာဖြစ်သူ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်ကြီး ဘဘဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် ကွယ်လွန်ခဲ့တာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အခုလိုရေးသားလာခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။“မိဘ နှင့်တကိုင်းထည်းထားခဲ့တဲ့ဆရာသခင် ​ကျေးဇူးရှင်ခု​တော့ ​နေလည်း​ပျောက် ညအ​မှောင်​ရောက်ခဲ့ရပါပြီ။ဆရာ​ရေဖော်မပြနိုင်တဲ့ဝမ်းနည်း ​ကြေကွဲမှု​တွေ ရင်မှာပိုက်ရပါပြီ။ဆရာ့အိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းကြီးထဲက တခုထဲ​သော ပန်းချီကား…….
ဆရာ အချစ်ဆုံး ဆိုတဲ့သမီး​နောက်ထပ်ကန်​တော့ရမဲ့ ​မွေး​နေ့​တွေမရှိ​တော့ပါဘူး။ဆရာချစ်တဲ့ မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာ​လောကကြီးကိုခု​တော့ စွန့်သွားပြီလားဆရာရယ်အ​ဖေ​ခေါ်စရာမရှိ​တော့ပါဘူးဆရာ​ရေဆရာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝ က​နေသမီးငိုရှိုက်သံကိုကြားနိုင်ပါ​စေ”လို့ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ အကယျဒမီဝါဝါဝငျးရှကေတော့ ယနအေ့ခြိနျထိတိုငျ အရှယျတငျနုပြိုပွီးလနျးဆနျးတကျကွှနတောဖွဈပါတယျ။အနုပညာအလုပျတှကေိုလညျး လုပျကိုငျနနေိုငျဆဲဖွဈတဲ့ဝါဝါဝငျးရှကေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြမြားစှာကို သိမျး ပိုကျထားနိုငျဆဲဖွဈပါတယျနျော။ဝါဝါဝငျးရှကေ မွေးမလေးနှဈယောကျကိုလညျး အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါလကျတှဲချေါယူပွီး သခြောသငျကွားပေးတာဖွဈပါ တယျ။
ဝါဝါ‌ဝငျးရှကေ ခဈြသားသမီး၊မွေးတှနေဲ့အတူ ပြျောရှငျရှငျနဲ့နထေိုငျနတောဖွဈပါတယျနျော။ဝါဝါဝငျးရှရေဲ့သားတှကေလညျး မိခငျကိုစိတျခမျြးသာအောငျထားပေးပွီး အမွဲပြျောစရာတှသော ဖနျတီးပေးနတောဖွဈပါတယျနျော။ဝါဝါဝငျးရှတေို့မိသားစုလေးကစညျးစညျးလုံးလုံးရှိကွပွီး အပွနျ အလှနျ ဖေးမကူညီ ကွပါတယျ။လကျရှိမှာဆိုရငျတော့ ဝါဝါဝငျးရှေ ရဲ့သားငယျလေး ဝါဇငျက မိသားစုနဲ့အတူ စငျကာပူမှာနထေိုငျနတောဖွဈပါ တယျ။
အကယျဒမီ ဝါဝါဝငျးရှကေ ဆရာဖွဈသူ စှယျစုံရအနုပညာရှငျကွီး ဘဘဗိုလျကလေးတငျ့အောငျ ကှယျလှနျခဲ့တာနှငျ့ပတျသတျပွီး အခုလိုရေးသားလာခဲ့တာဘဲ ဖွဈပါတယျ။“မိဘ နှငျ့တကိုငျးထညျးထားခဲ့တဲ့ဆရာသခငျ ​ကြေးဇူးရှငျခု​တော့ ​နလေညျး​ပြောကျ ညအ​မှောငျ​ရောကျခဲ့ရပါပွီ။ဆရာ​ရဖေျောမပွနိုငျတဲ့ဝမျးနညျး ​ကွကှေဲမှု​တှေ ရငျမှာပိုကျရပါပွီ။ဆရာ့အိမျရဲ့ ဧညျ့ခနျးကွီးထဲက တခု ထဲ​သော ပနျးခြီကား…….
ဆရာ အခဈြဆုံး ဆိုတဲ့သမီး​နောကျထပျကနျ​တော့ရမဲ့ ​မှေး​နေ့​တှမေရှိ​တော့ပါဘူး။ဆရာခဈြတဲ့ မွတျနိုးတဲ့ အနုပညာ​လောကကွီးကိုခု​တော့ စှနျ့သှားပွီလားဆရာရယျအ​ဖေ​ချေါစရာမရှိ​တော့ပါဘူးဆရာ​ရဆေရာမွငျ့မွတျတဲ့ဘုံဘဝ က​နသေမီးငိုရှိုကျသံကိုကွားနိုငျပါ​စေ”လို့ ရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။မိသားစုနှငျ့ ထပျတူ ဝမျးနညျးရပါတယျ။ဖတျရှု့ပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးလညျး ဘေးအန်တရာယျ အပေါငျးမှ ကငျးဝေးကွပါစေ လို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။